Iyo Nyowani Yakanyanya Extreme Madzimambo eGehena Amulet Pendant yemasimba akasarudzika eiyo - Nyika yeAmulets
Mahara Amulet chitoro Blogs Yakavimbiswa Kwevatengi Kuongorora FAQ Taura nesu X PEDYO
YEDU MUTENGI WEDZIDZO ANOGONESESA VANOTAURA VENYU - Isu tinotakura kubva kuTeruel - Spain
Akanakisa Amulets Unganidzo
Greatium Mweya Inotungamira
Midzimu Quantum ® zvimiti
Eleganta Sirivha Amulet
Mashiripiti Pini kusimudzira hupenyu hwako
Magical Unganidzo Mapakeji
Simba Simba Amulets
Maitiro atinoyedza Amulets uye Rings
Ngirozi Nengirozi huru
Mashiripiti uye simba
Iyo Reiki Nyika
Sigil Basa uye Mashiripiti
Buddhism Chitendero & Maitiro
Mvere, Matombo ematombo uye maOgonites
Yakavimbiswa Kwevatengi Kuongorora
Iyo Nyowani Yakanyanya Makosi eGehena Amulet Pendant yemasimba akasarudzika evachengeti vemagedhi
44 zvinhu zvasara
zvinhu Hapana Anoshanda Akabatwa
100% Mari Yakapiwa Guarantee
Ini ndinofunga kuti hapana chidziviriro chakasimba chinowanikwa sezvakangoita neichi chisumbu. Kuve nekudzivirirwa uye kufarirwa nemadzimambo egehena zvinoshamisa. Aladin akangove ne1 Genii, iwe une 9 kana iwe ukawana iyi amulet. Iwo madzimambo egehena ano zodzwa mune iyi amulet kuti akushandire iwe.
Ivo vachakubatsira iwe:
Uri kunetsekana mubhizinesi rako kana basa rako here?
Usiri kuwana kukwidziridzwa kwaJob iwe kwawanga uchishanda zvakaoma kudaro?
Mukuru wako haasi kukuona?
Vatengi vako havaremekedze iwe?
Hapana munhu ari kuuya muchitoro chako?
Unoda kuendesa bhizinesi rako kunhanho inotevera, asi iwe unonzwa kuvharika?
Unozviona zvakaoma here kuwana rudo rwehupenyu hwako?
Shamwari dzako hadzina kukuda?
Mhuri yako haina hanya newe?
Vana vako havana kana kukuziva?
Mukadzi / murume wako haasisiri kukutarisa nemeso akafanana?
Iwe unotamba lottery asi iwe hauna kana bahati?
Kutamba makadhi neshamwari dzako uye kugara uchisunungura?
Hapana rombo rakanaka mumutambo chero upi zvawo?
Kunzwa kusakara nguva dzese?
Haisi kunakidzwa nehupenyu hwako hwepabonde?
Unonzwa hupenyu hwako huri kupera?
Hakuna mwenje pakupera kwemugero?
Kwete kuona imwe nzira yekubuda nayo?
Hapana aripo kuti akubatsire?
Iwe uri kunetseka kuti usangane magumo kusangana
Bhizinesi rako riri kuda kuburitsa dhayeti
Iwe unoda kutanga bhizinesi asi usingazive kuti sei uye sei
Makwikwi ako ari kutora vatengi vako
Iwe waizoda kuendesa bhizinesi rako kune rinotevera danho
Iwe unonzwa kurudziro yekusiya makwikwi ako kumashure
Iwe hauzive nzira yekufambira mberi mukuita kwako mabasa
Mukuda mari yakawanda here?
Unoda chibvumirano chitsva?
Kuva nyeredzi yemuvhi?
Gadzirisa matambudziko nemhuri yako?
Tora wako wekare?
Unoda mari kune zvimwe zvekuwedzera?
Unoda mari yemota, zororo, chipo?
Vatengi vako havakuremekedze '
Hapana mari yakasara uye hauna kuwana pakupera kwemwedzi?
Iyo Inesimba Simba Yakagadzirwa nemaoko - Sterling Sirivha pendant yeMadzimambo eGehena inoshandiswa kukumbira, kuchengetedza uye nyasha dzemadzimambo makuru egehena. Iyi chaiyo Daemon yakaratidza kuve iri kushandira varume. Zviratidzo zvavo zvakasarudzika zvakaiswa mukati medenderedzwa remashiripiti kuona kuchengetedzwa kwemushandisi. Simba ravo rakasimba zvisingaite uye rinogona kukonzera kukuvara kune mushandisi kana risina kuchengetedzwa nemazvo senge iyi amulet. Iyo amulet ngatitore mutakuri kukumbira mumwe nemumwe wavo uye nekukumbira kwavo nyasha kuti vazadzise zvinangwa zvataurwa kune daemon Ichi ndicho chinesimba chakasimba kupfuura zvese chakamboitwa chekupemha masimba edemon.
Chimwe nechimwe kana chindori chakatsaurirwa kune muridzi uye hachigone kushandiswa nevamwe vanhu. Nokudaro, zvakakosha kuti iwe utiudze zvakajeka zvako kuti Mudzidzisi Sortiarius agone kupedza tsika yakatsaurirwa. Tiudzei patinorayira:
zita renyu rizere
Zuva rekuzvarwa uye nenzvimbo kwaunogara
Kuti udanidzire chero zvavo vangoti izita katatu yakateedzerwa na: ini, (zita rako) ndinodana (zita re daemon) kushandira chinangwa changu. Mushure meizvi iwe nyatsotaura chinangwa chako kune daemon uye wopedzisa ne: "Enda kunze uko undoita kudaira kwangu".
Dhiyabhorosi iri muchirongwa ichi:
Bheerizebhubhi (Bhaari-bhaeri) en el sur
Astaroth - Kumabvazuva
Azazel-Chechipiri South (tsanga shomanana)
Asmodeus - Kuruboshwe kumusoro
Fleruti - Kumusoro Kurudyi
Satasnachia - Maodzanyemba
Lucifuge Rofocale - Mid Kurudyi
Belial - Kuruboshwe Bhomba
Decarabia - Right pasi
Magical Ruzivo Blog
Kufunga uye kufungisisa
Iyo Yekupedzisira Wiccan Nhungamiro
TINE HANYA - NDINONZIRA
Facebook Chakavanzika Kirabhu
Customer Rutsigiro Boka
© 2021 World of Amulets. | vatengi@worldofamulets.com